vendredi, 12 mars 2021 08:29
Sary : Dr Barison Andriambololona
Mahazoma-Maevatanana : Barazy vaky, namakivaky tanàna nanimba zavatra ny rano
Rano be tao tanànan’i Mahazoma, Distrikan’i Maevatanana, Faritra Betsiboka, ny alakamisy 11 martsa maraina. Vokatry ny fahasimban'ny barazy izay tsy nisy fanamboarana efa ho folo taona mahery no antony. Namakivaky ny tanàna nandrava trano ny rano. Faritra tokana, tsy mbola nanendrena governora i Betsiboka raha toa ka efa amperinasa avokoa ireo governora amin'ny Faritra miisa 21 eto Madagasikara. (Sary : Dr Barison Andriambololona) (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 12 mars 2021 08:11
Maintinandry- Vatomandry : Fikomiana nitarika fandratrana zandary sy famotehana fananam-bahoaka
Nivadika ho fikomiana ny fandraràna fety miteraka fitangoronana olona amin’ny andro alina tao an-drenivohitry ny Kaominina Maintinandry, Distrikan’i Vatomandry, ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 araka ny toromarika avy amin’ny lehiben’ny Distrika. Nisy andian’olona tsy faly noho izany ka nirohotra nanao fihetsiketsehana teo anoloan’ny biraon’ny Kaominina, ary nandrahona ny hanongana ny Ben’ny tanàna. Tonga ny mpitandro ny filaminana. Vao maika nahatezitra an’ireo andian’olona ny fahatongavan’ireto farany ka nitora-bato izy ireo. Niditra an-keriny tao amin’ny biraon’ny Kaominina sy nanakorontana ary namotika dosie maromaro. Nosakanan’ireo andian’olona ireo ny lalana miditra ny tanàna. Potika ny fitaovana maro tao amin’ny birao, eny hatramin’ny Sainam-pirenena aza nodoran’ireo andian’olona nanao fikomiana ireo. Naratra voatora-bato ny lohan’ny komandin’ny brigadin’ny zandary Vatomandry. Efa hisasak’alina vao voafehy ny toe-draharaha. Olona miisa 11 no nosamborin’ny EMMO Distrika Vatomandry, natao famotorana. Misy mpampianatra amin’izy ireo, misy lefitry ny Ben’ny tanàna teo aloha.
jeudi, 11 mars 2021 19:57
Ankazomborona-Marovoay : Maty novonoina ralehilahy, niharan’ny fanolanana ramatoa vadiny
Tao Manganikelifeo, Fokontany Ambonara, Kaominina Ankazomborona, Distrika Marovoay no nitrangan’ity heloka bevava ity ny alin’ny 7 hifoha ny 8 martsa 2021. Niharan’ny vono nitondra amin’ny fahafatesana rangahy iray, 43 taona, izay JAMA na mpiandry tanàna teo aloha, nandritra izany koa no niharan’ny fanolanana ramatoa vadiny, 49 taona. Mpiasa tamina miaramila tao amin’ny 406 ème Compagnie AM Maevarano ity farany. Tonga tao an-toerana ny zandary avy ao Ankazomborona vantany vao nahazo fampandrenesana. Nalain'ny havany ny faty taorian’ny fanamarinana natao. Mitohy ny fanadihadiana.
jeudi, 11 mars 2021 19:40
Belo sur Mer : Zandary iray no lavo nifanehitra tamin'ny andian-dahalo, naratra ny Ben'ny tanàna
Lavo nandritry ny fifandonana tamin'ny andian-dahalo, androany 11 martsa 2021, tany amin'ny lalana anelanelan'i Ankikilaly sy Ankevo Kaominina Belo sur Mer ny Zandary fototra kilasy faharoa (GP2C) Rakotovahoaka Jaona izay miasa ao amin'ny Kaompania Zandarimaria Morondava. Naratra teo amin'ny tanany nandritr'izany fifandonana izany ihany koa i Solo Fanoina, Ben'ny tanàna Belo sur Mer izay niaradia tamin'izy ireo. Ho tohin'ny hetsika hazalambo ireo dahalo nanafika an'i Belo sur Mer izay nahafatesana zandary iray tamin'ny 16 febroary 2021 no nitrangan'izao loza izao. Nidina tsy nisy hatak'andro any ifotony ireo zandary maro avy ao amin'ny CSAO Malaimbandy sy Morondava hanampy ireo efa any an-toerana hanohy ny hazalambo. Efa nahazo fitsaboana vonjimaika ny Ben'ny tanàna naratra ary efa andalana manaraka vonjy aina. Manentana ny mponina any an-toerana ny Zandarimariam-pirenena mba hampita vaovao raha mahita na maheno na mahasikaritra toe-javatra mifandraika amin'ity tranga ity mba ahasamborana ireo dahalo.
jeudi, 11 mars 2021 19:36
RN25 : Nieren-doza ilay kamiao mpitondra solika
Kamiao semi-remorque iray mitondra gazoala hiazo an’i Manakara no nilatsaka tamin’ny sisin-dalana teo amin’ny PK31 amin’ny lalam-pirenena faha25 raha niala mba tsy hifandona tamina semi-remorque iray hafa avy any Ranomafana nifanena taminy. Tapaka nandritra ny fotoana lavalava ny fifamoivoizana. Ny fiara madinika sy ny moto ary ny mpandeha tongotra no afa-nandeha mandram-pisintonana ilay kamiao nitondra solika. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 11 mars 2021 11:56
Isotry : Mpangarom-paosy niezaky ny nandositra saingy tratran'ilay polisy vavy
Vazaha vavy saika haka taxi tetsy Isotry no nangaronin'ity tovolahy ity ny paosiny ka lasany tamin'izany ny finday "redmi note 8 T". Hitan'ilay Vazaha moa ny fihetsik'ilay mpangarom-paosy ka nitabataba niantso vonjy izy. Ilay Polisy vavy niasa tetsy Isotry no nahita ity olon-dratsy nandositra ity ka nanenjika ity farany. Tsy nampoizin'ity mpangarom-paosy ity hanenjika sy hahatratra azy ilay Polisy vavy saingy ny mifanohitra amin'izay no niseho. Tsy namelan'ilay Polisy raha tsy tratrany ilay mpangarom-paosy, ary mbola tratra teny aminy ihany koa ilay finday an'ilay Vazaha avy nangalarina. Mody mitondra harona sachet foana ity olon-dratsyity ka toy ny olona mpiantsena ireny izy hanafenany ny asa ratsy nataony. (Loharanom-baovao : Polisim-pirenena)
mercredi, 10 mars 2021 19:27
Loharanom-baovao : Polisim-pirenena
Sinoa mpisandoka sy mandrahonana mpiasa : Telolahy nidoboka am-ponja vonjimaika any Antanimora
Sinoa miisa telo no tonga tao amina orinasa iray tetsy Behoririka izay manana ny foibeny any Sina nilaza fa izy ireo indray no mpitantana vaovao voatendry hitantana ilay orinasa eto an-toerana. Avy dia nanapatra ny fahefany moa ireto telo lahy ireto ary nandrahona ireo mpiasa izay mitady tsy hitovy hevitra aminy. Naharay fitarainana mahakasika izany ny Polisy ka nidina teny an-toerana avy hatrany ary nisava ireo antontan-taratasy mahakasika ireto Sinoa ireto. Hita tamin'izany fa efa lany Visa izy ireo, mialokaloka ho mpizahan-tany eto Madagasikara. Nilaza ihany koa ireo mpiasa ao amin'ilay orinasa fa teknisianina no nafaran'izy ireo avy any Sina fa tsy Mpitantana ny orinasa.
mercredi, 10 mars 2021 19:08
Nosy Maorisy : Niverina mihiboka hatramin’ny 25 martsa
Nanao fanambarana ny praiminisitra maorisiana Pravind Jugnauth, omaly alina, fa hiditra amin’ny fihibohana manomboka ny 10 martsa, hifarana amin'ny 25 martsa, ary mihatra manerana ny nosy, ho fisorohana ny fiparitahan'ny Covid-19. Miato avokoa ny asa aman-draharaha rehetra ankoatr'ireo sehatra tena ilain'ny olona toa ny fivarotam-panafody, ny hopitaly, ny mpitandro filaminana. Efa nikatona nanomboka ny fiandohan’ny herinandro teo ny sekoly rehetra ao an-toerana. Niisa 5 ireo narary ny talata 09 mars 2021, ka nitondra ny tarehi-marika ho 15 ny marary any an-toerana.641 hatreto no tratran'ny aretina Covid-19 hatramin'ny niatombohan'ny valanaretina maneran-tany, ary 10 ireo maty. Efa nanomboka nanao ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 amin'ny alalan'ny vakisiny i Nosy Maurice.
mardi, 09 mars 2021 08:49
Antsohihy : Mipetra-potsiny ny "Gare routière" vaovao
Manana "Gare routière" vaovao i Antsohihy ho an'ireo zotra anatin'ny faritra Sofia. Foto-drafitrasa vita tamin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina izy io, mipetra-potsiny tsy ampiasaina. Ny parcage ampiasaina amin'izao anefa dia mamotaka mampijaly ny mpandeha sy ireo mpandraharahan'ny fitaterana. Olom-boafidy no voalaza fa manakana ny hampiasana ilay "Gare routière" vaovao satria ny "HVM no nanao azy". Tsy malaina ny hifandra ao ireo kaoperativa saingy tsy te hanana olana sy gidragidra amin'ilay olom-boafidy ka miaritra loto sy ao anaty fotaka miandry fandaminana. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 09 mars 2021 08:27
67ha : Nidina an-dalambe nilanja sora-baventy ireo mpivarotra tao amin’ny Coum
Iray amin’ireo toerana telo hanorenan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra foto-drafitrasa vaovao ho tsena ny kianja taloha ao amin’ny Coum 67ha, ankoatra ny eo Behoririka izay efa vita ary notokanana, sy ny eo Anosy nisy ny parking ny Antenimierandoholona teo aloha. Nahazo fampilazana hiala ao amin’ny Coum ireo mpivarotra vokatry ny asa tanana ao an-toerana. Tsy nandà ny fanatsara atao izy ireo ary nanomboka nandrava ny talatalana sy ny tranoheva nampiasainy tao ireo mpivarotra ny faran’ny herinandro iny.